सानेपा का’ण्डको रहस्य, नयाँ कुरा सार्वजनिक : मुना र विजयको मोबाइलमा भेटिए यस्ता फोटा ! – Butwal Sandesh
सानेपा का’ण्डको रहस्य, नयाँ कुरा सार्वजनिक : मुना र विजयको मोबाइलमा भेटिए यस्ता फोटा !
यमुना अधिकारीले छोरी मुना अधिकारी कार्कीलाई फोन गरिन्। ‘भोलि बिहान अल्का अस्पताल जानु छ, तिमी बिहान यतै खाना खानेगरी आउनू,’ आमाले भनिन्।खाना म यतै खा,ए,र आउँछु, अनि जाउँला अस्पताल,’ छोरी मुनाले जवाफ दिइन्, ‘तपाईंको रिपोर्ट पनि मैसँग छ।’ भोलिपल्ट बिहान यमुना छोरीलाई कुरेर बसिन्। ९ बज्यो, १० बज्यो र ११ बज्यो तर, छोरी आइपुगिनन्। एकैछिनपछि खबर फै,लि,यो सानेपामा अर्जुन कार्कीको घरमा घ,ट,ना भयो। रेडियो, टिभी र अनलाइनहरुले खबर दिए। केहीले तस्बिर पनि छापे। आफ्नै छोरीको घरमा घ,ट,ना घ,टेको र मुनालाई उपचार गर्न स्टार हस्पिटल लगिएको खबर सुन्नेबित्तिकै यमुनाले भदालाई फोन गरेर बोलाइन् र तत्कालै अस्पताल पुगिन्।पौनेघण्टापछि डाक्टरहरुले मुनाको मृ”’त्यु भएको सुनाए। यमुना चि’च्या’इन, ‘मेरो छोरीलाई मा”र्‍यो…’कसले छोरी मा”र्‍यो, यमुनाले स्पष्ट भन्न सकिनन्। उनी मु”र्छा प’रेर ढ”लिन्। दश मिनेटपछि आफन्तहरुले उठाएर उनलाई घर लैजान खोजे, तर उनी मानिनन्। मुनाको श”’व पो’स्ट’मा’र्ट’मका लागि पाटन अस्पताल लगियो। त्यसपछि मात्रै यमुनालाई लिएर थापाथली फर्किए उनका आफन्त।
फरेन्सिक रि,पो,र्ट छोरीको ‘ह”त्या’पछि यमुनाको जिन्दगीको सहारा नै टु’ट्यो। २० वर्षअघि सडक दुर्घटनामा परेर उनका श्रीमान् निमबहादुर अधिकारीको निधन भएको थियो।सुदुरपश्चिम कृषि निर्देशनालयमा इन्चार्जका रुपमा कार्यरत निमबहादुर जेठी छोरी कृपा सुत्केरी भएपछि उनलाई भेट्न काठमाडौँ आउँदै गर्दा दु र्घटनामा परेका थिए।
निमबहादुर र यमुनाका चार सन्तानमध्ये जेठी छोरी कृपा र माइली मुनाको विवाह भइसकेको थियो। नाबालक छोरा शिव र कान्छी छोरी शकुनको रेखदेखसँगै घर–व्यवहारको जिम्मेवारी यमुनाको काँधमा आइपर्‍यो। दुःख,जि,लो गरेर यमुनाले छोरा शिव, कान्छी छोरी शकुनको पढाइ पूरा गरिदिइन्। उच्च शिक्षाका लागि शिव र शकुन दुवै अमेरिकातर्फ लागे।
केही वर्षअघि अर्जुन र मुनाको परिवार बानेश्वरबाट ललितपुरको सानेपा बसाइँ सर्‍यो। त्यसपछि मुनाले आमासँगको भेटघाटलाई झनै तीव्रता दिन थालिन्। उनी हरेक दिनजसो एकपटक माइती पुग्थिन्। आमाको रेखदेख गर्थिन्। उमेरको कारण यमुनाको स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न समस्या देखिन थालेको थियो। ‘औ’षधिउपचारको सबै जिम्मा मुनाकै थियो। गएको पाँच वर्षदेखि उनले यसैगरी आमाको हेरचाह गरिरहेकी थिइन्। दशैँ, तिहारको बेला सबै चाँजोपाँजो मुनाले मिलाइदिन्थिन्।
‘मुना र उनका पति अर्जुनबीच ‘ख’ट’प’ट भइरहन्थ्यो। त्यो थाहा पाउँदा यमुना निकै ड,रा,उँ,थिन्। झ”’ग’डा गर्नुहुँदैन भनेर छोरीलाई सम्झाएर पठाउँथिन्। सानेपास्थित आफ्नै घरमा माघ २७ गते मुनाको ‘ह”त्या भएपछि ७० वर्षीया यमुना बेसहारा भइन्। त्यसैले अमेरिकामा रहेका छोरा शिव आएर आमालाई उतै लिएर गए। दिदीको ह”त्या’बा,रे स,,त्य तथ्य बाहिर आए हुन्थ्यो,’ बुधबार अमेरिका उड्नुअघि मुनाका भाइ शिव अधिकारीले आफन्तसँग भने। दिदी मुनाको ह”त्या भएको खबर सुनेपछि उनी माघ २९ गते अमेरिकाबाट नेपाल आएका थिए। १५ दिन बसेर उनी आमालाई लिएर अमेरिका फर्केका छन्।
अमेरिका जानुअघि गएको सोमबार उनले महानगरीय प्रहरी परिसर जावालाखेल पुगेर मुनाको घरमा घटेको घटनाको सीसीटीभी फुटेज हेरेका थिए।कामदार विजय चौधरीले मुनाको ‘ह”त्या गरी आफूले ‘दे´हत्या´ग गरेको प्रहरीले दाबी गर्दै आएको छ। तर, विजयले सो घटना घटाउनुको कारण भने प्रहरीले घटना भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि दिन सकेन।
‘आजसम्म प्राप्त सबै प्रमाणका आधारमा चौधरीले नै मुनाको ‘ह”त्या गरेर आफूले ‘देहत्या´ग’ गरेको देखिएपनि त्यसको कारण अझै पत्ता लागेको छैन’, एसएसपी राईले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी विभिन्न प्रमाण संकलन गरेर थप अध्ययन गरिरहेका छौं।’प्रहरीले दुवैले प्रयोग गर्ने मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गरेको छ। तर, दुइटैको मोबाइलमा आशंका जन्माउने खालका केहीपनि सामग्री नभेटेको एसएसपी राई बताउँछन्।
घटना घटेकै दिन प्रहरीले मुना र विजयले प्रयोग गर्ने मोबाइललाई नियन्त्रणमा लिएर परीक्षण गर्न पठाएको थियो। सो रिपोर्टलाई प्रहरीले फागुन ८ गते बुझेको थियो। मसिनो ढंगले डिजिटल रिपोर्टलाई अध्ययन गर्दा सो घटना घटाउनुपर्ने कुनै कारण फेला नपरेको प्रहरीको भनाइ छ।दुईजनाकै मोबाइलमा रहेका कन्टेन्ट हेर्दा विजयले मुनालाई ‘मा”र्नुपर्ने कारण देखिएन,’ एसएसपी राईले भने, ‘मेसेजहरुमा पनि त्यस्तो शं´का जन्माउने केही पाएका छैनौं।’
घ,ट,ना घ,टे,को पर्सिपल्ट विजय चौधरीका बुबा जानकी चौधरीसँग बयान लिएको प्रहरीले अझैसम्म पनि मुनाका पति अर्जुनसँग भने बयान लिएको छैन। उनीसँग ‘समय मिलाएर’ बयान लिइने प्रहरीको भनाइ छ।प्रहरीले आवश्यकताका आधारमा सूक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ, अर्जुन सरसँग पनि समय मिलाएर बयान लिने काम हुन्छ,’ एसएसपी राईले भने। तर, अर्जुन कार्कीले प्रयोग गर्ने मोबाइल भने प्रहरीले अ,नु,स,न्धा,न गर्दैछ। ‘अर्जुन कार्कीले मोबाइलमै सीसीटीभी फुटेज हेर्न मिल्ने सफटवेयर जोड्नुभएको रहेछ,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘घरको सबै गतिविधि हेर्न मिल्ने उक्त सफ्टवेयरलाई अर्जुन सरले घटनाको दिन हेर्नु भयो कि भएन, यसबारे बुझ्दैछौं।’श्रोत नेपाल खबर